Shidaalka Ogadenia iyo Hammuunta Zenawi
Dagaalkii ba’naayee ka aloosmay Geyiga Bariga Dhexe sanadihii Lixdamaadka iyo horaantii Todobaatanaadka waxay Dunida horumartay (Developed Countries) ee Reer Galbeedka,u horseeday dhaqaalo xumo la soo daristay suuqyadooda. Sababihii ugu waynaa ee dhaqaala xumidaa keenayna waxaa ugu waynaa Shidaalkii suququlka galayee ka iman jiray Wadamada Carbeed. Hadaba si ay arrintaa uga gaashaantaan waxay badhtamihii Todobaatanaadka culayska saareen meel ay ka helaan shidaal iyo tamar ka duwan kan Bariga Dhexe, ama aalad iyo farsamo cusub oo dabooli karta baahida warshadahooda. Daraasad iyo Baadhitaan dabadeed waxay arrini isugu biyo shubatay in culayska la saaro tan hore oo ah in la helo suuqyo hor leh oo lagaga maarmi karo ama illaa xad lagu dhimmi karo ku tiirsanaanta Bariga Dhexe, iyada oo aan meesha laga saarayn in loo sahan tago sidii loo heli lahaa Curisyo Tamareed ka duwan Saliida Carbeed ee Warshadahoodu u baahan yihiin. Goobihii culayska la saaray ee loo arkayey in Shidaal iyo suuq ka duwan kan Carbeed laga heli karana waxay noqdeen Wadamo ka mid ah Laatiin Ameerika iyo Afrika. Wadamadii Afrika ee sida aadka ah laysugu mashquuliyay daraasadahana loogu sameeyey waxaa ugu mug waynaa kuwa dhaca Galbeedka iyo Bariga Afrika. Hordhacan iyo maqaalkan gaaban ulama jeedo inaan si Cilmiyan ah ugu soo bandhigo Xaqiiqooyinkii Baadhitaanadaas, ee waxa aan is leeyahay wax ka iftiimi raadadkii ay ku yeelatay Dhulalka ay Soomaalidu degto.
Dhammaadkii Todobaatanaadka iyo billowgii Sideetamaadka waxaa si habaqle ah ugu soo qamaamay Dhulka Soomaalida (Somali Republic) Shirkado Reer Galbeed ah oo sahmin iyo baadhitaano heshiis kula galay Dawladii Soomaaliyeed ee Xilligaasi jirtay. Shirkadahii ugu tunka roonaana waxaa ka mid ahaa: Agip, Conoco, Amaco, Shell, iyo Chevron. Kuwaasoo inta badan sii raad raac uun ku samaynayay sahmino hore oo (Seismograph exploration) ku mudaysnaa Sanadihii Kontamaadkii, iyo Lixdamaadkii. Waxayna isku ballaadhiyeen Gobollo ka mid ah Jamhuuriyaddii Soomaaliya. Waxaa xusid mudan diyaarintii, iyo Maalgalintii hawshaas inay gacan wayn ku lahaayeen Hay’ado Caalami ah oo aan ka xusi karno Bankiga Aduunka (World Bank), iyo Hay’adda Lacagta Aduunka (IMF) Inta badana Shirkadahaasi waxay Daraasadoodii (Baadhitaankii) ku heleen waxyaabo dhiirigalinaya sii waditaanka hawshooda. Walow sanadba sanadka ka danbaysa xaaladda siyaasadeed, iyo tan ammaan ee Wadanku sii murgaysay. Gobolada sida aadka ah baadhitaankoodu u rajo galiyayna waxaa ka mid ah Gobolada Waqooyi siiba Dhulka Xeebta xigga iyo Guban. Meelo badan oo ka mid ah Gobolada Sool, Sanaag iyo Nugaal. Sidoo kale waxaa rajo heer sare ahi ka soo baxday Gobolka Bari, meelo ka mid ah Gobolka Shabeelaha Hoose iyo Bakool. Shirkadahaas qaar ka mid ahina waxay iska indho tireen xaaladdii Wadanku ku sugnaa, hawlgalkoodiina waxaa uuba soo gaadhay ridistii Xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre. Waxaase hakad galiyey hawshoodii Dagaalkii Sokeeye ee ka dhacay Carriga Soomaaliya. Waxaana la xaqiijiyay in qaar ka mid ah Shirkadahaasi ay amminkan Xafiisyo ku leeyihiin meelo ka mid ah Soomaaliya, walina ka rajo qabaan bal inay arkaan Soomaaliyoo nabad ah oo cagaheeda ku taagtan.
Isla Xilliyadaa waxaa Wadanka Ethiopia ka jiray Daraasado baadhitaan oo kuwaa hore la mid ah oo ay wadeen Shirkado iyo Khubaro Reer Bari ah (Wadamadii Shuuciga) oon ka tilmaami karno Wadankii la odhan jiray Midawga Sofiyeeti, Bulgaariya, iyo Romaaniya. Kuwaasoo iyana isku ballaadhiyay Gobollo ka mid ah Ethiopia. Gaar ahaan Dhulka Soomaalidu ay dagto ee Ethiopia Xoogga ku haysato (Ogadenia) Oo aan Maqaalkan wax kaga bayaamin doono marxaladihii iyo wajiyadii kala duwanaa ee ay baadhitaanadaasu soo mareen, iyo natiijooyinkii ka soo if baxay, iyo waliba halka ay arrimahaasi saldhigteen.
Dhul baadhista Ogadenia waxay isku kol jaanqaadeen kuwii Jamhuuriyadda Soomaaliya Sanadihii Kontomaadka iyo Lixdamaadkii. Taasoo Shirkaduhu iyagoo hadba Magac cusub huwan ay Xuduudaha Saddex xagalka ah isaga tallaabi jireen (Jamhuuriyaddii Soomaaliya, NFD, iyo Ogadenia). Baadhitaanadaasi ma aanay dhalin wax soo saar la taaban karo, inkasta oo ay ka shanqadhiyeen rajo sare oo laga muujiyay in Khayraad dihini ceegaago Dhulka Ogadenia. Ugu danbayna waxaa sanadkii 1974kii Shirkad lagu magacaabi jiray Tenneco ay daahfurtay, kuna dhawaaqday inay Ogadenia ka heshay xaddi badan oo ah Gaaska dabiiciga (Natural gas), meelaha kala ah Jeexdin, iyo Elaale. Daah furka shidaalkaasi ma noqon mid ay ka faa’iidaysato Dawladii Dergigu oo iyadu xilligaa talada Dalka haysay sababo badan awgood, oo aynu kuwan ka xusi karno. Waa ta hore’e siyaasadda Wadanku ma daganayn oo waxaa jiray kacdoon dadwayne iyo cabudhin ay Xukuumadu ugu falcelinaysay. Waa ta xigtee waxaa dhammaan geyiga Geeska Afrika xilligaa ku habsatay Abaar ba’an oo dad iyo duunyaba ku hoobteen.(Waa tii Soomaalidu ugu yeedhay Dabodheer) Dhaqaalo xumi hawshaa lagu fuliyana meesha kama madhnayn. Waxaa intaa dheer oo iyana rajadii iyo riyadii calfashada Shidaalkaa liifada usii gaabshay Dagaalkii ka dhex qarxay Ethiopia iyo Soomaliya. (Ogaden war 1977) Sanado badana geyigaas ka dhigay goob colaadeed oo ay ku hardamaan labada Xukuumadood Ciidamadoodu iyo Jabhadihii ay kala taageerayeen Intii mudo ahna hadal haynta arrinkaasi waxay noqotay mid meel la iska dhigay oo laga yarehe nastay. Hayeeshee Sanadkii 1986kii ayaa Mangistu soo nooleeyey rajadii uu ka qabay ka faa’iidaysiga khayraadka Ogadenia. Wuxuuna heshiisyo la galay shirkado hor leh oo raad-raac ku sii sameeya baadhitaanadii jiray kuwo hor lehna duma (seismograph exploration). Waxayna culays badan saareen sidii ay maalgalin, iyo suuq-gaynba ugu heli lahaayeen Mashaariicdii horee qabyo tirka u baahnaa. Carcartaa cusubina waxba kama soo naaso-cadaan, waxaana ka horyimid kacdoon uusan filanayn oo kaga yimid Dadkii degaanka. Kuwaasoo badheedh, iyo dooxataysiba ku ekeeyey shaqaalihii hawsha waday iyo ciidamadii u ilaalada ahaa. Waxayna sababtay dhimasho badan, afduub iyo qafaalasho loo geystay Khubaradii Shisheeyaha ahayd iyo Saraakiishii sar saree Ciidamadii ammaanka u sugayey. Gumaadkii, cajo-juglayntii iyo tacadigii ay Ciidamadu kula dhaqmeen Shacbigii degaanka ma aysan noqon mid hoos u dhigta kani-adaygoodii. Taasina waxay sababtay in Mangistu iyo Xukuumaddiisii ku hungoobeen mala awaalkoodii, candhuuftoodana dib u liqaan. Waxaana Sanadkii 1991 hilfaha loo qaaday Dawladiisii Dergiga, isagoon hadhuubna darin Shidaalkii Ogadenia.
. Xukuumada Tigreega ee maanta talada Ethiopia gacanta ku haysa kolkii ay la wareegeen xukunka, waxay Dadyowgii (qowmiyadihii) kala duwanaa ee Ethiopia dii hore ku hoos noolaa ugu baaqeen xukun Federaal ah, iyo ismaamul hoosaadyo qowmiyaduhu u badax banaana yihiin, arrinkaasoo loo guuxay la iskuna raacay qorista iyo ansixinta Dastuur (Constitution) cusub oo Wadanka lagu dhaqo. Kolkii ay sal-muggii ugu fadhiisteen Kursigii talada, xukunkoodiina ku baahay Wadankoo idil Wayaanuhu way ku ballan fureen Qowmiyadihii talowadaaga la ahaa. Haba ugu sii daraato Soomaalida Ogadenia. Waxay billaabeen kufsi, dhac, iyo ku tumasho badan oon loo aabe-yeelin, meel ka dhac wayna u gaystay xuquuqdii ay shacbigu lahaayeen. Halkaana waxa ka unkamay iska caabin ay Shacbiga Soomalida Ogadenia ugu midoobeen AAYA-KATALINTOODA oo ay hogaanka u hayso Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadenia (JWXO) Waxaa Wayaanaha Tigreegu aruursaday Macaan jecel, iyo Saxanleef huwan magacii Soomalida oo ay danaheeda ku fushato, kuna tilmaantay inay yihiin Madaxdii ismaamulka Soomaalida, kuwaasoo Tobankii sanee inaga tagey hadal hayntooda iyo riwaayadooduba aanay Jigjiga soo dhaafin.
Soo saarka iyo iibgaynta Shidaalka Ogadenia waxay ka mid noqdeen hammiga beenta ah ee Males Zenawi iyo inta Kursigiisa ka ag dhaw. Kolkii ay Xukunka la wareegeenba waxay raadco aan kala go’ lahayn u galeen sidii ay ku heli lahaayeen maalgalin hawshaasi ugu qabsoonto. Horaantii Shagaashanaadka, waa intaysan shaadhka badaline, waxay geed dheer iyo mid gaabanba u fuuleen inay dunida ka dhaadhiciyaan in maanta Ethiopia waa-cusubi u baryay, oo aan Ethiopia-yadii hore loogu soo hagaagin. Wayna u meel martay illaa xad iyagoo ku caano maalay sanado dhawr ah. Waxyaabaha ay Ummadaha (Dawladaha) Caalamka ka iibinayeena waxaa ka mid ahaa. Federaalka iyo Dastuurka cusub ee la jeexay, kaasoo awood dheeriya siinaya Qowmiyadaha, xukunka iyo ismaamulkuna uu gacanta Shucuubta kala duwan ku sugnaanayo.In Xukuumadu furfurayso suuqyadeeda, adeegyada ganacsiguna ay noqonayaan kuwo xor ah (privatization, open economy, free market, and good governance). Ogalaanshaheedii ay u ogalaatay in Eretria ay noqoto Dal ka madax banaan taasoo ay tusaale uga dhigteen in Ethiopia isbedel doon tahay. Timaamahan aynu soo sheegnayna waxay gol-jileec kaga heshay dhammaanba Dawladaha reer Galbeedka. Oo midiba (dawladiba) aragti gooniya ay ku salaysnayd u riyaaqida isbadalkan ku yimid Ethiopia. Ugu horaynba ballanqaadyadani haday dhaboobaan waxay keenayaan horumar, koboc dhaqaale, suuq ganacsi, iyo horumar guud oo ku yimaada aqoonta bulshada IWM. Kuwo dhinaca Diintay ugu xaglinayeen, Kuwana malaha waxaabay is lahaayeey Gacan hoorsigeeda iyo baryadeedan aan dhammaadka lahayn baydun kaga raysan.
Judhiiba Xukumadii Zenawi waxay kaalmo aan la qiyaasi karin ka heleen Wadamadaa aynu soo sheegnay. Sidoo kale waxaa nugayl, iyo xidhiidh fiican u muujiyay hay’ado caalami ah sida: Bankiga Aduunka (World Bank), Hay’adda lacagta Aduunka (IMF), Bankiga Horumarinta Afrika iyo kuwo kale. Oo dhammaantood u fidiyey deeqo isugu dhafan siismo iyo daymo soo celin fududi shuruudo u yihiin. Mid ka mid ah heshiisyadii ay la gashay Bankiga Aduunku waxa uu ahaa soo saarista Shidaalka Ogadenia. Tigreegu waxay abuureen Shirkad ay ugu magac dareen Calub Gas. Taas oo ay yidhaahdeen waxay ka dhaxaysaa Xukuumada, hantiilayaal, iyo Saamilay. Bankiga Aduunkuna wuxuu fulinta Mashruucan ugu talagalay hanti dhan USD$74.3Million, sidoo kale waxaa iyana heshiiska soo galay Bankiga Horumarinta Afrika, iyo Dawlada Netherland oo ku kala yaboohay $27m iyo $4million, sida ay u kala horeeyaan. Waxayna qandaraaska fulinta hawshaas ku siiyeen Shirkad Shiinays ah. Qorshuhuna waxa uu ahaa in Shirkadaasi ay Jeexdin ka samayso Warshad Shidaalka sifaysa, iyo in sidoo kale la dhiso wado isku xidha Shillaabo iyo Harar. Wax soo saarka halkaa ka soo baxana waxay yidhaahdeen waxaa lagu qaybsanayaa sidii hantida loo kala gashaday. Waxaa iswaydiin mudan wixii ay u qoondeeyeen Somaalida Ogadenia oo iyagu ahaa Hantiilayaashii dhulka. Waxay yidhaadeen Soomaalidu boqolkiiba shan (5%) ayay la wadaagaysaa shan gobol oo Ethiopia ka mid ah (Waxan ay ugu yeedhaan Ismaamulada, ama Kililka) Waxaa iyana in la ogaado mudan in Maamulka Zenawi aanu wax wada tashi ah kala yeelan Shacabkii, waxgaradkii, aqoonyahankii Soomaalida Ogadenia, oo ay ahayd inay iyagu noqdaan bud-dhigayaashii hawshan. Mashruucaasi ma noqon mid taaba gala iyadoo ay ugu wacnayd sababo aynu ka tilmaami karno: Waa ta koowaade, hawshani waxay ku qabsoomi kartaa meel jawi nabadeedi ka jiro. Shacabka Soomaalida Ogadenia iyo hogaankooduna way ka horyimaadeen dulinkan ay xaqiraadu ku jirto. Waa ta xigtee, waxaa durba soo ifbaxay wax isdaba marin, iyo musuqmaasuq baratan dhex dhigay hogaankii saree EPRDFta, nin walibana waxa damac ka galay inuu jeebka ka buuxsado hantidii loogu talagalay in Mashruucani ku hirgalo. Taasoo sabab ka mid ah u noqotay is afgaranwaagii dhex maray Tamarat iyo Males Sidoo kale waxay sababtay isku daygii la isku dayay in la dilo Cabdilmajiid Xuseen. Oo ay iyagu isku dayga dilkaa u xambaarsheen Ururka Alitixaad. Xogo lagu kalsoon yahayse ay sheegaayaan, inay salka ku haysay khilaaf dhexmaray Madaxda Xukuumadda, oo ku salaysan hanti badan oo Mashruucaasi lahaa oo laysku dayay lunsadkeeda
Teeriyo 1995 illaa amminka aynu joogno waxay Xukuumada Meles hadba soo noolaysaa rajada ay ka qabto in ay maruun ka jibbo keento soo saarka Shidaalka Ogadenia. Waxayna heshiisyo iyo carablaadlaadisba kula gashay shirkado aynu ka xusi karno kuwan soo socda. Parsons Corp., Hunt Oil, Sicor Inc., SIL(Jordan), Petronas, iyo kuwo kaloo badan. Tallaabo kasta oo ay qaadana waxaa hoda ismoodsiiskooda dhalanteedka ku salaysan. Ugu danbayna August 19keedii, 2001, waxa uu Bankiga Aduunku si rasmi ah u sheegay inuu ka baxay heshiiskii uu Dawlada Ethiopia kula galay Mashruucii soo saarista Shidaalka Ogadenia. Kadib markii uu yaqiinsaday, ballanfuryada iyo wax isdaba marinta Xukuumada Melez. Taliska Wayaanuhu sidaa kuma quusane wuxuu mudooyinkan danbe raacdo u galay sidii uu hanti iyo maalgalin ugu heli lahaa Mashruucan. Indhawaalana waxaa lexejeclo u muujiyey Shirkada Saitek International, iyo Hantiilayaal ay ugu faro-dhuuban yihiin Niman Carbeed. Taasoo keentay heshiis ku sheegii Bishan December 22keedii, 2003 ay kula saxiixdeen Addis Ababa. Waxaase walaac laga muujiyey sidii loo heli lahaa ammaan iyo.xasilooni lagu socodsiiyo heshiiskan. Waa Qolo damaca iyo wax islahaysiintu madax martaye, oon waayaha iyo dhacdooyinkii la soo maray ku tusaale qaadanine. Waxay dhowaanahan soo laba-laabeen wixii kaliyahaa ee ay ku caan baxeen. Oo ah dil, kufsi, cabudhin, iyo ku tumashada xuquuqda Shacabka Soomaalida Ogadenia, siiba Gobolada Qoraxay, iyo Godey. Iyagoo mala-awaalkoodu yahay inay nugleeyaan diidmada Shacbiga, si dhagartoodu ugu meel marto (soo saarista Shidaalka). Waxaanse leenahay Malazoow Hortaa jiraba calfan waa. Dadwaynaha reer Ogadenia sidaa ku meel marin maysid, ee waxaad kala kulmi iska caabin iyo inay xadhig furaan shirqool kastood maleegto. Iyaga iyo hogaankooda uun bayna ka go’daa soo saaristu. Waxayna ku leeyihiin dhadhancso oo dhuux meerisyadan oo ka mid ah Murtidii run sheega ahayde Macallin Dhoodaan.
Dhux dhux laguma soo jiidi karo buur dhadhaaba ahe
Dhulna ka culus wax hees lagu dhakriyo dhaanis gabadheede
Dhayal qoladii moodaayse way kula dhanaanaane
Dhawaaqiyo fadhatooy adoon dhaarba ku harraadin
Mudada aad dhigteen way dhawdee aan isa soo dhawro
Mudada aad dhigteen way dhawdee aan isa soo dhawro!!
Qore: Samatar Guled